Sunday March 26, 2017 - 09:41:37 in Somali News by Super Admin
Waa kuma Garyaqaan Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar)..? Raysalwasaare Xigeenka Cusub ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa ah nin Sharci yaqaan, macalin sharciga ka ahaa Jaamacada Hargeisa.
2008: waxa uu shahaadada sare ee Master-ka ka qaatay jaamacad ku taal dalka koonfur Africa, wuxuuuna takhasusay xeerka dhaqaalaha caalamka, xeerka caalamiga ah iyo baarista sharciga.
January 1999 — March 1999: La-taliye sharciga ee Gudida diyaarinta sharciyada ee kililka Shanaad ee dalka Ethiopia.
2008 – Xisbiga UCID ayaa u magacaaabay xubin ka tirsan Guddiga Doorashooyinka Somaliland
Dadka yaqaan ee beeshiisa Ciidagale Isaaq waxeey ku dhaarteen inuu ka mid yahay Saraakiisha ugu sareeysa Sirdoonka Ethiopia ee arrimaha Somalia.
Masiirkii sare ee dalka waxaa lagu aaminay shaqsigaas aan meelna taariikhdiisa uga jirin waxqabad Somalinimo ?